၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၇:၄၈ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
အရေးမကြီး မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၁၈:၂၀ -၉၃‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Reverted 1 edit by Zwal Mhan (talk) to last revision by Aungookingofcelestials. (TW) စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၁၈:၁၈ +၉၃‎ ‎Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၁၇:၁၃ -၁၂၁‎ ‎Aungookingofcelestials ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Zwal Mhan (ဆွေးနွေး) ၏ တည်းဖြတ်မူ 503337 ကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်လိုက်သည် (သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ-Happiness through harmonyသည် ၁၉၄၈-၆၂ထိသာသုံး၍ ၂၀၀၈ခြေ/ဥ ခန်း၁၃တွင် နိုင်ငံအလံ/တံဆိပ်/သီချင်း/မြို့တော်ကိုသာဖော်ပြ) motto မပါ စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၁၅:၄၇ +၁၂၁‎ ‎Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Motto of Myanmar စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
အရေးမကြီး မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၀၃:၅၉ -၉၄‎ ‎Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Zwal Mhan (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို Hintha ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ‎ ၁၅:၄၉ +၁၇‎ ‎CommonsDelinker ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ Replacing Pa-o_nationality_flag.svg with File:Flag_of_the_Pa-O_National_Organisation.svg (by CommonsDelinker because: File renamed: Correct file name to match standard naming scheme for flags.).
မြန်မာနိုင်ငံ‎ ၁၄:၂၀ +၉၄‎ ‎Zwal Mhan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး‎ စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:RecentChangesLinked/ဆီဆိုင်မြို့" မှ ရယူရန်